RW Cumar, Waxqabadka Laga Sugayo iyo Caqabadaha Horyaalla! | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home BOGGA HORE RW Cumar, Waxqabadka Laga Sugayo iyo Caqabadaha Horyaalla!
RW Cumar, Waxqabadka Laga Sugayo iyo Caqabadaha Horyaalla!
Cumar C/rashiid Cali Sharma’arke oo kasoo jeedo qoys siyaasadda Soomaaliya caan ku ahaa ayaa galabta loo magacaabay xilka Raysul Wasaaranim ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya.
Qaar kamid ah dadka ka faallooda siyaasadda Soom aaliya waxay u arkaan in Madaxwayne Xasan Sheekh uu qaaday labo sano kadib wadadii uu Sheekh Shariif ku bilaabay markii uu 2009kii u xushay Cumar C/rashiid Raysulwasaarihiisii koowaad.
Cumar waa siyaasiga kaliya ee laba jeer xilkaa qabto taniyo intii ay Soomaaliya gobonimada qaadatay. Aabihiis, Cabdirashiid, ayaa ahaa Ra’iisul Wasaarihii ugu horeeyay ee Soomaaliya, markii dambena Madaxwayne dalka ka noqday ilaa la dilo 1969kii.
Tan kale oo loo akhrin karo ayaa ah Cumar oo lagu eedeeyo isaga iyo Sheekh Shariif inay amar ku siiyeen C/raxmaan Cabdishakuur inuu saxiixo isku haysashada dhul badeedka Soomaaliya iyo Kenya ku muransanyihiin ayaa la iswaydiinayaa haatan sababta uu Xasan Sheekh ugu abaal mariyay Cumar inuu ka dhigo Raysul Wasaare iyada oo ay taagantahay dacwadii ka dhalatay heshiiskii xukuumadii Cumar gashay. Dacwadaas ayaa haatan hortaalla Maxkamad caalami ah.
Ilaa iyo hadda dad badan ayaan ogayn sababaha uu xilligan adag Madaxwayne Xasan Sheekh uu Cumar ugu doortay inuu noqdo Ra’iisul Wasaare.
Dhibaatada ugu wayn ee hor taalla Cumar Cabdirashiid ayaa ah sidii uu muddo gaaban ugu soo dhisi lahaa xukuumad tayo leh oo hadana loo dhanyahay. Waxaa kaloo horyaalla oo shaqa badan uga baahan sidii Barlamaanka uu xukuumadiisa ugu codayn lahaa iyada oo ay ku jiraan Golaha Shacabka Xildhibaano hore aad uga soo horjeeday maamulkii Cumar, kuna diiday heshiiskii Is-af-garadka ahaa ee badda Soomaaliya oo ay xukuumaddiisa saxiixday.
Waxaa kaloo horyaalla ugu yaraan ilaa 7 hindise-sharciyeed oo laga doonayo in si degdeg ah ay xukuumadiisu ku mariso Barlamaanka si loo gaaro hindisaha higsiga 2016.
RW Cumar waxaa laga doonayaa inuu hagaajiyo xiriirka dawladda dhexe iyo maamullada oo hadda qaarkood uu aad u liito, gaar ahaan Puntland oo waayadan dambe aad uga soo horjeeday dawladda dhexe, kana biya diidsayd siyaasadda Madaxwayne Xasan Sheekh Maxamuud.
Waxaa kaloo laga sugayaa sidii uu uga fogaan lahaa waxyaabihii khilaafka dhaliyay ee Madaxwaynaha iyo Ra’iisul Wasaarayaashii ka horreeyay kala geeyay, khilaafyadaas o curyaamiyay hawlihii xukuumadda iyo guud ahaan higsiga 2016.
Qodobka kale ee xasaasiga ah ee la doonaayo in Ra’iisul Wasaare Cumar uu hagaajiyo waa xiriirka Dawlada Federaalka iyo Beesha Caalamka oo haatan aan wanaagsanayn kadib ridistii xukuumaddii hore iyo eedeymihii cod-lacag-ku-badalashada ee loo jeediyay Barlamaanka.
Dadka u kuur gala siyaasadda Soomaaliya ayaa waxay su’aalo iska waydiinayaan sida Cumar uu karti ugu yeelan karo wax ka qabashada caqabadaas oo dhan maadaama RW Sharmarke looga bartay waxqabad yari.
Su’aasha la iswaydiinaya ahaa ah, Ra’iisul Wasaare Cumar C.C Sharmarke mala dhamaysan doonaa Madaxwayne Xasan Sheekh Maxamuud ilaa laga gaarayo 2016 mise sidii caadada ahayd ayuu xilka ka tagi doonaa 12 bilood kadib.
Previous articleCumar Cabdirashiid waa Ra’iisul Wasaaraha Cusub ee Soomaaliya
Next articleHoggaamiye Shisheeye Hagaa Waa Humaag!!